Cunto Kafeeji Caano Qaboojiye ah - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Kareemka kareemka farmaajo farmaajo ee jilicsan oo jilicsan, kareem leh oo xasillooni ku filan in lagu isticmaalo gudaha iyo banaanka keegaaga
Qaboojinta farmaajada kareemka waxaa lagu sameeyaa jiis kareem ah, subag, sonkor budo ah iyo soo saar iyo lammaano leh uun dhadhan keeg ah oo aad qiyaasi karto. Ka fikir arrintaas. Jiiska kareemku wuxuu asal ahaan la mid yahay jiiska. Cheesecake wuxuu la socdaa DHAMMAAN WAXYAABAHA. Qaboojiyaha farmaajada qoyan ayaa inta badan lagu lamaaneeyaa keeg jilicsan oo casaan ah , keega karootada , doolshe shukulaato ah iyo xitaa keega liinta !
Asal ahaan, khalad kuma khaldami kartid adoo adeegsanaya kareemka kareemka kareemka qabow ee wax kasta oo ay ku jiraan koobabka iyo buskudka sonkorta leh.
keega kareemka kareemka leh soodhada liinta
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan qaboojinta farmaajada kareemka ayaa ah inay tahay cunto karinta qolof. Taasi waxay kuu muuqan kartaa wax yar oo adiga kugu yar laakiin asal ahaan taasi waxay ka dhigan tahay in waxyaabaha sonkorta ku jira barafkan ay sarreeyaan in gunta sonkorta ay isu beddelaan kiristaalo yar yar oo ay u sameystaan ​​lakab khafiif ah oo qalafsan oo keega ah.
Maxay tani u tahay cabsi? (i aamin, waa CAJIIB!)
Haddii aad waligaa la shaqeysay qaboojiyaha farmaajada ka hor intaadan ogaanin waxay leedahay u janjeera naxdin leh inay ahaato wax yar oo qoyan, waxyar oo jilicsan iyo in badan oo aan degganeyn cimilada diiran.
Kareemkaan kareemka ah ee jiiska qaboojiyaha ayaa sifeeya si aad u deggan oo loo isticmaali karo buuxinta keega, qabowga banaanka, koobabka iyo xitaa buskudka. Weli waan ka fogaan lahaa isticmaalka qabowgan hoosta jacayl inkastoo, farmaajada kareemka iyo fondant kaliya is fahmi karin oo aad ku dambeyso lakab dhalaalaya oo sonkor gooey ah oo ka hooseeya fondant.
Sida Loo Sameeyo Kareemka Farmaajada Qaboojiyaha
Si aad dhab ahaan u sameysid qaboojiyaha farmaajada kareemka waxaad ku sameyn kartaa qiyaastii 10 daqiiqo oo fidsan.
sida loo sameeyo keega strawberry fiican
Ku kareem qolkaaga subagga heerkulka leh lifaaqa daboolka illaa uu ka fiicnaanayo oo siman yahay oo aan lahayn buurbuur (hoose).
Ku dar jiiska kareemka heerkulka qolkaaga iyo kareemka illaa inta ay kafiicnaaneyso subagga.
Ku billow inaad ku darto sonkortaada budada ah (la sifeeyey) hal koob markiiba markiiba adoo isku qasan. Ha ku darin koobka soo socda illaa kan ugu horreeya si buuxda loogu daro.
Mar haddii sonkortaada budada ah la dhex galiyo oo dhaxanku uu siman yahay waad dhamaysay! Kani waa dhalaal baraf badan oo farmaajo ah si uu u xasilloon yahay oo uusan 'u dhalaalin doonin keegaaga oo dhan.
Waxaan qirayaa in jiiska kareemka kareemka qolofta leh uu runtii iga maqnaa muddo dheer. Ha igu fahmin qalad, waxaan jeclaan jiray inaan ku cuno buskudka iyo jeex fiican oo keega karootada ah oo ka yimid mid ka mid ah rootida rootida laakiin markii aan isku dayi lahaa inaan naftayda ka dhigto inaan ku isticmaalo keegga macmiilkayga, runti weligay ma dareemin inay shaqeynayso. Waxay ahayd mid aad u jilicsan ama aan dhadhan lahayn.
Inta badan markaan arko kareem farmaajo, waxay ku darsatay dareere sida caano ama kareem. Waxaan dareemayaa inay tani runti sababi karto in dhaxanku ay noqoto mid aad u jilicsan. Waa hagaag koobabka laakiin kuma fiicna keega. Marka maxaa loogu darayaa?
sidee u sameysaa keega strawberry
Waxaad ogaan doontaa in cuntadani ay leedahay subag ka badan saamiga farmaajada marka loo eego qaabka caadiga ah ee loo yaqaan 'cheese cheese'. Subaggu wuxuu ka caawiyaa xasilloonida, dhadhanka, iyo kareemka. Waxaa jira oo keliya farmaajo kareem ah oo dhadhan fiican ku daraya dhaxanta laakiin aan aad u badnayn oo uu jabinayo dhaxanta oo ka dhigaysa mid aad u qoyan.
Talooyin Ku Saabsan Qaboojinta Farmaajada Farmaajada Guusha
Miyaad ilaawday inaad keento farmaajadaada kareemka heerkulka qolka? Waxaan kuu sheegayaa sir, weligay ma sameyn doono. Waxaan si fudud uga soo saarey farmaajada kareemka xirmada, waxaan u jarjarayaa xabadaha iyo microwave 10 ilbidhiqsi. Waqtiga aan qiyaasayo subagga iyo sonkorta, farmaajada kareemka waxay ku jirtaa heerkulka qolka
Markaan ka hadlayo subagga, badiyaa waxaan haystaa subag heerkulka qolka markasta laakiin haddii aad ilowday, waxaad microwave kartaa subaggaaga 10-seken kordhin illaa aad ka riixi karto faro dusha sare ee subagga oo xabbaddu wali hayso waxay qaabeysan tahay. Uma baahnid subagga inuu aad u jilicsan yahay ama way adkaan doontaa in lagu daro farmaajada si guul leh.
Kafee sonkortaada budada ah si aad uhesho subag subag badan laakiin waan qirayaa, si dhib ah weligey sidan uma sameyn
Ma u baahan tahay subaggaaga in uu noqdo caddaan? Ku dar xoogaa midabaynta cuntada cad!
Waad wareejin kartaa soosaarida vanilj wixii soo saar ah oo lagu amaano keegga (ka fikir liinta liinta ama yicibta keegga udgoon)
Runtii ma u baahan tahay inaad u isticmaasho subagga aan cusbada lahayn si ay u barafoobaan farmaajo? Jawaabta oo kooban waa haa. Haddii aad isticmaasho subagga cusbada leh waxaad MALAHAN u dareemi kartaa sida barafku uu macno ahaan u dhadhaminayo cusbo. Adoo isticmaalaya subag aan cusbo lahayn waxaad xakameyn kartaa heerka milixdu ku jirto ee subaggaaga. Haddii waxa aad leedahay oo dhan ay yihiin subag aan cusbayn, ha murugoon. Kaliya isticmaal waxa aad haysato iskana dhaaf milixda dheeraadka ah ee ku qoran cuntada.
Caanaha kareemka kareemka macaan ee adag oo adag oo ku filan dhuumaha ama dhaxanta oo buuxi keegaaga. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:shan iyo toban daqiiqado Wadarta Waqtiga:labaatan daqiiqado Kalori:1989kcal
▢12 oz (340 g) farmaajo qolka
▢12 oz (340 g) subag aan cusbo lahayn qolka
▢48 oz (1361 g) sonkorta budada ah
▢1 qaaddo (1 qaaddo) vanilj cad
Ku kareem subagga jilicsan ee ku lifaaqan lifaaqa suufka ilaa uu ka siman yahay. Ku dar jiiskaaga jilicsan ee jilicsan oo sii wad kareemka hoose illaa inta si buuxda loogu daro oo u siman yahay.
Si tartiib ah ugu dar sonkorta budada ah hal koob markiiba, adoo si buuxda ugu daraya ka hor intaadan ku darin koobka xiga. Ku dar vanilj iyo milix. Isku qas ugu hooseeya 5-6 daqiiqo illaa intaad ka jilicsaneyso.
Wixii subag cad, ku dar midabaynta cuntada cad. Ku keydi haraaga subagga ku jira qaboojiyaha illaa toddobaad ama barafee ilaa 6 bilood.
Qiyaas-biyoodkaas looma dhaafi karo wax ka badan 4 saacadood.
Kalori:1989kcal(99%)|Kaarboohaydraytyada:305g(102%)|Protein:5g(10%)|Dufan:87g(134%)|Dufan Dufan:53g(265%)|Kalastarol:245mg(82%)|Sodium:788mg(33%)|Kaliumperyamper:122mg(3%)|Sonkor:298g(331%)|Vitamin A:2905IU(58%)|Kaalshiyam:92mg(9%)|Bir:0.5mg(3%)
cuntada fudud ee fudud ee layaabka leh ee bilowga ah
sida loo sameeyo isku-darka keega strawberry dhadhanka guriga
digsi dubista oo leh god dhexda ku yaal
sidee u sameysaa dhadhanka keeg sanduuqa sida keega wax dubta?